प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काढाको प्रयोग, फाइदा कि नोक्सान? - E-BreakingNews
Home Swasthey प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काढाको प्रयोग, फाइदा कि नोक्सान?
प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काढाको प्रयोग, फाइदा कि नोक्सान?
मानिसहरु आफूलाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन एक लेडिज दैनिक काढा बनाएर पिउने र भिटामिन सी ट्याबलेट लिने गर्थे । यो क्रम धेरै महिनासम्म चल्‍यो त्यस पछि विभिन्न समस्या आउन थाल्यो। कब्ज, पेट दुखाई जस्ता समस्याहरूले उनलाई निरन्तर हैरान गरिरह्यो र जब उनी डाक्टरकहाँ गइन्, उनले यो पत्ता लगाए कि उनले मसला र भिटामिन सी ओभरडोजको कारण यस समस्याको सामना गरिरहनु भएको छ।
रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कोरोना भाइरसलाई हराउन सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। तर आजकल मानिसहरु प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन बिभिन्न प्रकारको सल्लाहहरू प्रयोग गर्दैछन्। यसका लागि कसैले अश्वगन्धा, मरिच, तुलसी, लसुन, हींग जस्ता मसलाले बनेको काँढ पिउँदैछन्, र कसैले दिनको धेरै पटक भिटामिन सी गोली खाइरहेको छ।
तर औषधी र काढा सही मात्राको बारेमा ज्ञानको अभावका कारण अब यी व्यक्तिहरू नयाँ समस्यामा पर्दैछन्।
डाक्टर आशीष जायसवाल, चिकित्सा विभागका वरिष्ठ सल्लाहकार भन्छन्: दालचीनी, मरिच जस्ता चीजहरूको अत्यधिक मात्राले अल्सर, पेट दुखाइ वा छातीमा पोल्ने समस्या हुन्छ । यसले कलेजोलाई पनि क्षति पुर्‍याउँछ। पेटको दुखाइमा मसलाको अधिक मात्रा भएमा पेटको अल्सर हुने गर्छ ।
यो चिन्ताको विषय हो, यदि मधुमेहका बिरामीहरूले आवश्यकता भन्दा बढी गुलियो प्रयोग गरे भने रगतमा चिनीको मात्रा धेरै घट्छ र अस्पताल भर्ना हुने जस्ता अवस्था पनि आउन सक्छ। मसलाको अधिक मात्राको कारण, गर्भवती महिलाहरूले गर्भपतन पनि गर्न सक्दछन्। भिटामिन सीको अधिक मात्राले बान्ता जस्तो धेरै समस्या निम्त्याउन सक्छ।
दिनको २.५ ग्राम बेसार खाना स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ, त्यसैले यो भन्दा बढि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ। यदि ८ ग्राम वा सोभन्दा बढी बेसार हरेक दिन खाइन्छ भने, लुज मोसन, पखाला, कब्ज र अल्सर जस्ता रोग हुन सक्छ। हरेक दिन १ ग्राम भिटामिन सी ले तपाईंलाई स्वस्थ राख्दछ, यदि त्यो भन्दा बढी भएमा मिर्गौलालाई क्षति पुर्‍याउँछ र पत्थरी पनि हुन सक्छ। रासस